Bold News အရောငျရငျ့မှတျတမျး စကျတငျဘာ ၂၀၁၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » Bold News အရောငျရငျ့မှတျတမျး စကျတငျဘာ ၂၀၁၉
Bold News အရောငျရငျ့မှတျတမျး စကျတငျဘာ ၂၀၁၉
Posted by kai on Sep 16, 2019 in Editor's Choice, Myanmar Gazette | 17 comments
Bold News အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
* ﻿New York နဲ့ San Francisco မွို့တှမှော ပွသပွီး ရုံပွညျ့အားပေးမှုရခဲ့တဲ့ ” မီ” ရုပျရှငျကား။
* San Francisco နဲ့ Fort Wayne မွို့က ၃၁ကွိမျမွောကျ ရှဈလေးလုံးအမှတျတရအခမျးအနားမြား။
* မွနျမာနိုငျငံရဘေေးနှငျ့သဘာဝဘေးသငျ့ပွညျသူမြားအတှကျ San Francisco, Los Angeles. Fort Wayne မွို့တို့က အလှူရနျပုံငှပှေဲမြား။
* AWCLA’s(LA) ရနျပုံငှစြေေးရောငျးပှဲတောျ။
* U.S. သို့ ခတေ်တကွှရောကျလာသော ဒယျအိုးဆရာတောျ၏တရားပှဲမြား။
* မောငျစှမျးရညျရဲ့ ဗိုလျခြုပျကြောျဇောမိသားစုနှငျ့ကနြောျတို့မိသားစု ဆောငျးပါး။
* တိမျမညျးရဲ့ ဇောျဂြီမှယူနီကုတျသို့ ပညာရပျဆောငျးပါး။
* မောငျမိုးညိုရဲ့ အမရေိကဝငျပေါကျတံခါးတငျးကွပျစပွုနပွေီလော လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဆိုငျရာဆောငျးပါး။
* ဝငျးဗိုလျရဲ့ ဇာတျလမျးတဈပုဒျရှိတဲ့ Hotel California ဂီတဆောငျးပါး။
* မိုးနတျသူဇာသီတာဝငျးနဲ့ အမေးအဖွေ။
* ခငျမောငျအေး(Azusa) ရဲ့ တှေးတစိမျ့စိမျ့ဟာသ။
* လစဉျဖောျပွနကြေ ဆရာမြိုးကြောျမွငျ့ရဲ့အငျ်ဂလိပျစာသငျ်ခနျးစာဆောငျးပါး၊ ကဗြာ၊ ကာတှနျး၊ ကနြျးမာရေးပညာပေးဆောငျးပါးမြား၊ ဗဒေငျ၊ သုတရသစုံလငျစှာ လစဉျထုတျမွနျမာ့ဂဇကျ ၂၀၁၉၊ စကျတငျဘာလထုတျ ထှကျနပေါပွီ။ မွနျမာဆိုငျမြားမှာ အခမဲ့ရယူပါ။
Russia Is Angry That China Stole and Copied Its Jet Fighter Designs
,The National Interest•September 12, 2019
Eight years of Trump’s tax returns subpoenaed by Manhattan District Attorney Cyrus Vance Jr.
PUBLISHED2HOURS AGOUPDATED 41 MIN AGO
The Manhattan District Attorney’s office has issuedasubpoena for eight years of President Donald Trump’s personal and corporate income tax returns, according toanew report.
The subpoena from DA Cyrus Vance Jr.’s office, was issued last month to Trump’s accounting firm, Mazars.
Vance’s office was already known to be investigating Trump’s company.
Majority of men don’t know they are at risk of HPV-related cancers, research shows.
Sept. 16, 2019, 10:33 AM PDT
“စဈပဲဖွဈမလား.. ၊ မဖွဈပဲ.. စဈပွီး(စဈဆေးရငျး…စဈဆေးရငျးပွီး) ကွမလား…”
… ‌ဆောျဒီသူဌေးနိုငျငံ.. ထရီလီယနျခြီခမြျးသာတာ.. သူတို့ကိုကာကှယျပေးဖို့.. ‌ငှထေုတျပေးရငျ စဈပှဲလုပျမယျလို့ ထရမျ့ကတော့.. ပွောဖူး..
အစ်စရေးကလညျး.. ‌ခုကာလက.. ရှေး‌ကောကျပှဲရာသီကွီး..။
ရနေံတှစြေေးတကျတော့.. အမရေိကားက.. ‌‌မွကွေီးထဲက..ရနေံတှအေကုနျထုတျရောငျး.. ၊ ကမ်ဘာ ရနေံအထုတျဆုံးဘှဲ့ ‌ကောကျဆှဲ..၊ ခြိုငျးနား-အမရေိကားကုနျသှယျစဈကို ‌ပိုထှကျလာတဲ့ငှနေဲ့ဖိ… အနိုငျယူ..။
ထရမျ့အတှေးမှာ.. ဟုတျလို့တော့.. နတောပါပဲ..။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ.. ‌တိုကျခိုကျမီးရှို့ခံရတာက.. ‌ဆောျျဒီရနေံမွေ..စှမျးအငျထုတျရာ‌နရောကွီး.. ကမ်ဘာ့ရနေံရဲ့ ၅% ထုတျနတောကဩှားသမို့.. ကနြျတဲ့နိုငျငံတှတေော့. ဂှိ..။
A congressional source says Democrats familiar with the details don’t dispute Iran carried out the attack — an important signal of bipartisan agreement.
ept. 16, 2019, 1:46 PM PDT / Updated Sept. 17, 2019, 4:19 AM PDT
“သမ်မတကွီးထရမျ့ရဲ့ အခှနျဆောငျရှငျးတမျး ၈နှဈစာကို ရုံးတငျပွဖို့.. ဆငျ့ခေါျရ”
ပွညျ့တနျဆာမလေး စတုနျးမီနဲ့.. ပလေးဘှိုငျးမိုဒယျမ ကို ‌ငှပေေးထားတာပွနျစဈဖို့.. ဘာဘာညာညာ‌တှစေဈဖို့.. ထရမျ့ရဲ့ အခှနျဆောငျရှငျးတမျး ပွီးခဲ့တဲ့ ၈နှဈစာကို ရုံးတငျဖို့.. နယူး‌ယောကျတရားရုံးကနေ.. ဆငျ့ခေါျခံရပါတယျ..။
ထရမျ့က နယူး‌ယောကျ-မဟာတနျမှာ‌ အမွဲတမျးလိပျစာထား.. နသေူမို့.. သူ့မူလဌာ‌နကေ.. ဆငျ့ခေါျတာပါ..။
အမရေိကားမှာ အမရေိကနျတိုငျး(တိုငျး) နှဈစဥျ အခှနျငှဆေောငျ..ရှငျးတမျးတငျကွရတာပါ..။
အဲဒီမှာ နှဈစဥျျလုပျခဲ့သမြှ ‌ငှပေေး‌/ငှယေူတှပေါသမို့.. ပါရသမို့.. အဲဒါစဈရငျ.. ပိုငျဆိုငျမှု.. ‌ငှပေေး/‌ငှယေူအကုနျပေါျပါတယျ..။
သမ်မတကွီးက.. ဘာ‌ကွော့ငျ့မှနျးမသိ.. သမ်မတဖွဈလြှကျနဲ့.. သူ့ အခှနျရှငျးတမျးကို တရားဝငျမထုတျပွနျပါ..။
အဲဒီတော့.. သူဘယျလောကျခမြျးသာ.. ဘာအကွှေးရှိ..။ ဘာလဲ.. ဘယျသူမှ တရားဝငျမသိ..။
ဘယျလိုရှငျးမယျမသိ…။ ‌ပေးဘူး..‌ပေးဘူးကှ.. လုပျခငြျလညျးလုပျဦးမယျထငျ၏..။
ဒီမိုကရစေီစနဈမှာ.. ‌ရှေး‌ကောကျခံရပွီးသူ/သမ်မတ(အကွီးဆုံးရာထူးရှငျ) ဟာ.. အာဏာရှငျတပိုငျးပဲမဟုတျပါလား..။
“Yang တို့.. ရမျးနိုငျမှတောျကာကမြယျခတျေ..”
အမရေိကနျတယောကျကို တလ ‌ဒေါျလာ ၁၀၀၀/တနှဈ၁၂၀၀ဝ ဘာမှလုပျစရာမလိုထုတျပေးမယျဆိုတဲ့.. UBI စနဈကို ဖနျတီးမယျ့.. မစ်စတာရမျးက.. ‌အရှေနျးဇာတိနှယျပါ..။
သမ်မတဖွဈရငျ.. သမ်မတအိုဘားမားရဲ့.. လူမညျးပထမသမ်မတလိုပဲ.. ‌အေးရှနျးပထမသမ်မတဖွဈမှာပါ…။
ဖိုဘီလို သတငျးဌာနကတော့..မစ်စတာရမျးဟာ.. ထရမျ့ကို ဘယျလိုဘိ Beat နိုငျတဲ့..သူပါလို့ဆိုပါတယျ..။
ဘာမဆိုငျညာမဆိုငျပွောရရငျ.. ၂၀၂ဝ မွနျမာနိုငျငံရှေး‌ကောကျပှဲမှာ.. ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီမြား.. မွနျမာတိုငျးကို တလ.. ကပြျ၁သိနျးထုတျပေးတာမြိုး.. နဲ့..မဲဆှယျဖို့ စိတျမဝငျစားဘူးလားမသိ..။
Sep 16, 2019, 09:30am
SEPTEMBER 25, 2019 3:23PM ET
A new report from the IPCC is yet another wake-up call for world leaders to take the climate crisis seriously.
Climate activists and world leaders have gathered this week in New York for the United Nations Climate Summit. But on Wednesday attention was focused across the Atlantic, where in Monaco the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change presentedaspecial report on the “unprecedented” impact warming temperature will have on the world’s oceans. It’s not good. The report — compiled by over 100 authors from 36 countries citing close to 7,000 accredited sources — paintsagrim picture of the effect warming oceans and the cryosphere will have on humanity, especially if nothing is done to curb emissions.
‘Our house is on fire.’ Global Climate Strike draws out hundreds of thousands of protesters in New York, DC
Doug Stanglin, Grace Hauck and Janet Wilson, USA TODAYPublished 7:42 a.m. ET Sept. 20, 2019 | Updated 10:27 p.m. ET Sept. 20, 2019
September 17, 2019, 8:00 AM PDT Updated on September 17, 2019, 8:05 PM PDT
The move comes after Japan last month cut South Korea fromaso-called “white list” of nations it deems safe for export of strategic materials. South Korea also plans to terminateaU.S.-endorsed intelligence-sharing pact with Japan and has filedacomplaint with the World Trade Organization against its neighbor for imposing tighter export controls on materials key to tech manufacturing.
‘Psychological experiences playabig role’
Obesity is “notachoice”, statesanew report from the British Psychological Society (BPS) that calls for changes in how people regard those who are obese.
While BPS does not support the classification of obesity asadisease, as the World Health Organisation does, it stresses the importance of avoiding “language and explanations that locate the ‘problem’ of obesity within individuals”.
The report explains that obesity is more complex thanaperson’s lack of willpower, as negative stereotypes suggest.
“Whilst obesity is caused by behaviour, those behaviours do not always involve ‘choice’ or ‘personal responsibility’,” it explains.
Wed Sep 4, 2019 – 4:10 pm EST
Pope Francis claims climate in state of ‘emergency’, asks world to ‘abandon’ fossil fuels
Climate Change, Environment, Environmentalism, Global Warming, Pope Francis, World Day Of Prayer For The Care Of Creation
VATICAN CITY, September 3, 2019 (LifeSiteNews) – Pope Francis has called upon the world to give up fossil fuels, claiming that the climate is inastate of “emergency” and that this has been caused by human activity.
In his Message for the World Day of Prayer for the Care of Creation, an ecumenical celebration held on September 1, the Argentine pontiff encouraged the world to adopt “simpler lifestyles” and to abandon fossil fuels
Iván Márquez appeared inavideo and announced thata“new phase of the armed struggle” was beginning.
He was one of the main negotiators of the peace deal in 2016.
The Colombian government said it was “a very worrying announcement”.
2019: Former commander Iván Márquez announces “a new phase of the armed struggle”
Trump landed crushing blows to3of California’s biggest priorities this week
Lauren Frias Sep 19, 2019, 10:55 PM
President Donald Trump spent two days in California this week. He not only raked in $15 million at fundraisers for his reelection campaign, but he took away some political wins.
The president and Gov. Gavin Newsom, who took the reins this year, fail to meet eye-to-eye on numerous issues — including homelessness, the environment, andastate law that wouldn’t allow candidates on the ballot without publicly releasing their tax returns.
President Donald Trump spent two days in California this week, and he derailed some of the state’s major priorities.
Trump has been at odds with California since taking office. The state, much like Texas during the Obama administration, has beenathorn in the federal government’s side. As of May, the state had sued the Trump administration 50 times and had some success.
Additionally, the president and Gov. Gavin Newsom, who took the reins this year, fail to meet eye-to-eye on several issues — including homelessness, the environment, andastate law that wouldn’t allow candidates on the primary ballot without publicly releasing their tax returns.
ရနျကုနျတိုငျးတှငျ လူဦးရေ ခွောကျသနျးကြောျရှိသညျ့အနကျ တရုတျ ၉၇၀၀ဝ ကြောျနှငျ့ ဘငျ်ဂါလီ ၆၀၀၀ဝ ကြောျ နထေိုငျကွောငျး ရနျကုနျတိုငျး လူမှုရေးဝနျကွီးပွောကွား
“ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးမှာ အိမျထောငျစု လူဦးရစောရငျးနဲ့ နထေိုငျကွတဲ့ တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုအလိုကျ လူဦးရကေ ဗမာ ၅၂၁၀၉၂၂ ဦး၊ ကရငျ ၂၄၃၇၂၂ ဦး၊ ရခိုငျ ၇၂၃၉၅ ဦးတို့ နထေိုငျပါတယျ” ဟု ဝနျကွီးဦးနိုငျငံလငျးက ပွောကွားသညျ။
ထို့ပွငျ ကခငြျ ၉၁ဝဝဦး၊ ကယား ၂၂၇၄ ဦး၊ ခငြျး၂၃၆၄၈ ဦး၊ မှနျ ၃၁၇၂၆ ဦး၊ ရှမျး ၃၅၈၂၅ ဦးတို့သညျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး သနျးခေါငျစာရငျးဖွငျ့ နထေိုငျကွောငျး၊ စုစုပေါငျး လူဦးရေ ၅၆၂၉၆၁၂ ဦး နထေိုငျလကြျရှိကွောငျး ဝနျကွီးဦးနိုငျငံလငျးက ပွောကွားသညျ။
“အခွားမြိုးနှယျစုမြားအနနေဲ့ အိန်ဒိယ ၂၂၇၇၄ဝ ဦး၊ ပါကစ်စတနျ ၁၅၁၃၃ ဦး၊ တရုတျ ၉၇၉၉၄ ဦး၊ မုံးဝနျး ၄၇ရ ဦး၊ ကိုးကနျ့ ၁၈၂၄ ဦး၊ ခိုလုံလီလြှော ၁၄၅ ဦး၊ ဘငျ်ဂလားဒေ့ရျှ ၇၄ဝ ဦး၊ ဘငျ်ဂါလီ ၆၃၅၅၃ ဦး၊ နီပေါ ၂၁၈၂ ဦး၊ အခွား ၄၇၉၁ရ ဦး စုစုပေါငျး ၄၅၇၇၀၅ ဦး နထေိုငျလကြျရှိပါတယျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတဈခုလုံးအနနေဲ့ လူမြိုးအလိုကျ လူဦးရေ ၆၀၈၇၃၁ရ ဦး နထေိုငျလကြျရှိပါတယျ” ဟု ဝနျကွီး ဦးနိုငျငံလငျးက ပွောကွားသညျ။
Edward Snowden says the government is in your phone, insists he only wanted to ‘reform’ the NSA
Sept. 16, 2019, 7:13 PM PDT / Updated Sept. 16, 2019, 8:20 PM PDT
Snowden spoke on Monday from Russia with Brian Williams, the host of MSNBC’s “The 11th Hour,” ahead of the release of his new memoir, “Permanent Record.” This is the second time Williams has interviewed Snowden. In 2014, Williams traveled to Moscow to meet with Snowden in person for the former CIA employee’s first interview with an American television network.
“Permanent Record” reveals new details about Snowden’s decision to leak classified information in 2013 to journalists at The Guardian and The Washington Post about the NSA’s bulk collection of phone and internet metadata from U.S. citizens.
မွနျမာ့ဂဇကျ (သတငျးစာ) အမရေိကားမှာ